Narconon Nepal - The Only Narconon Drug Rehabilitation Center in South East Asia
Today: Friday, April 23, 2021
About Narconon Nepal
ड्रग्सको समस्याबाट बच्ने र बचाउने उपाए
ड्रग्सको कुरा ग¥यो कि दुःखैको कुरो मात्र आउँछ । देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म म जहाँ पुग्छु त्यहाँ ड्रग्सले रुवाएका परिवार भेट्छु । नेपालगञ्जमा कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा एक महिला रुदै मेरो छेउँमा आउनुभयो र सयांै मानिसहरुको भिड्मा ह्वाँ ह्वाँ रुदै दुव्र्यसनमा परेको छोराले आफुलाई कुटेर घरबाट निकालेको सत्य कथा सुनाउनु भयो । मैले उहाँलाई तत्काल गर्न सक्ने सहयोग गरिदिएँ तर यस्ता आमा त्यहाँ कति होलान् कति । धनगढीमा पुग्दा सानासाना केटाकेटीहरुसमेत एचआईभी पोजेटिभ भएर मर्न वाध्य भएको कथा सुन्नु प¥यो । त्रिसुलीमा त्यस्तै कथा थियो । विरगञ्जमा रिक्सा चलाउनेले ड्रग्स खाएर परिवारलाई नपाली दिएका कारण छोरा छोरी भोख भोखै मरेको कथा सुनियो । हेटौडामा ड्रग्समा परि पूरै घर बेचेर पछि ती व्यक्ति माटोको ढिस्को भित्र सुत्न थालेको र त्यहिं उनको मृत्यू भएको कथा सुनियो ।
जहाँ जान्छु दुःखद घटनाहरुनै सुन्छु । मलाई चिन्ता हुन्छ, जो व्यक्ति ड्रग्समा पर्दछन् र छोड्न नसक्ने स्थितिमा पुगि दुव्र्यसनी बन्दछन् उनीहरु आफू, परिवार र समाजको लागि बोझनै सावित हुने गर्दछन् । ड्रग्समा परेपछि एकातर्फ जिउ दुख्ने, निद्रा नलाग्ने जस्ता शारिरिक समस्याले ड्रग्स लिन उसलाई वाध्य बनाईरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ उसको बानी व्यवहार र सोंचाई नै समाजलाई स्वीकार नहुने प्रकारको हुन्छ । ऊ आफ्नै आमा बावुलाई दुश्मन ठान्दछ, त्यो समाजलाई स्वीकार हुँदैन । उसले अफिस पढाई छोडेर त्यहाँ गरेको लगानी बर्वाद गरिदिन्छ त्यो मान्छेलाई मन पर्दैन । ऊ घर परिवारलाई सहयोग गर्दैन, कमाएको उडाउँछ र परिवारको सम्पत्ती नास गर्छ, त्यो सामजलाई स्वीकार हँुदैन । ऊ आफ्नो श्रीमतिलाई दुःख दिन्छ, त्यो परिवारलाई मन पर्दैन । ऊ खराव साथीसंग हिड्न चाहन्छ, त्यो अरुलाई मन पर्दैन । ऊ पैसाको लागि चोर्ने, ढाँट्ने, झगडा गर्ने गर्दछ, समाजलाई त्यो मन पर्दैन । ऊ राम्रा मान्छेहरु घरमा आउँदा भेट्दैन र राती अबेरसम्म नसुति विहान अबेरसम्म नउठ्ने गर्दछ, त्यो पनि आफन्तलाई मन पर्दैन । यस्ता दर्जनौ नराम्रा आचरण र व्यवहारहरु एउटा दुव्र्यसनमा परेको मानिसका जीवनमा आउने गर्दछन् । ड्रग्स छोडे पनि उसले यस्ता नराम्रा आचरण व्यवहारहरुमा परिवर्तन ल्याउन सक्तैन र पुनः ऊ यस्तै नराम्रा बानी व्यहोरा छोड्न नसकेकै कारण पुनः ड्रग्सको दुनियाँमा फर्कन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने उसको सभ्य समाजमा बस्ने क्षमतानै हुँदैन । अतः यहि सभ्यता सिकाउने वा सभ्य हुने क्षमता बढाउने कामलाईनै पुनःस्थापना भनिन्छ । ड्रग्समा उपचारभन्दा पनि पुनःस्थापनाको पक्ष ज्यादै जटिल छ । सभ्य समाजमा बस्न उसले अरुसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ, गरेको काम ईमान्दारीता पूर्वक समयमा पूरा गर्न सक्नु पर्दछ । परिवारको जिम्मा लिन वा परिवारलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । अरुलाई खुसी राख्न सक्नुपर्छ । चोर्ने, ढाँट्ने, खराव साथी भेट्ने, आवारा भएर हिंड्ने, ड्रग्स खान प्रयास गर्ने गर्नु हुँदैन । तर के हुन्छ भने लामो समय ड्रग्समा पर्दा उसको जिवननै असामाजिक प्रकारको भईसकेको हुन्छ । त्यसैले ड्रग्स छोडे पनि उसले नराम्रा आदत, व्यवहारहरु परिवर्तन गर्न सक्तैन र यसै कारणले ऊ घरपरिवार र समाजमा स्वीकार्य पनि हुन सक्तैन । स्वीकार्य नभएपछि पुनः घरमा झै झगडा गर्दै ऊ पुरानै स्वतन्त्र जिवनमा फर्कन्छ र फेरी ड्रग्समा पर्दछ ।
त्यसैले हजारौं दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिहरुको उपचार गर्दागर्दा मलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि ड्रग्सका दुव्र्यसनी भएका व्यक्तिहरुको आचरण र व्यवहार बदल्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्दछ । जसरी एउटा गोठाला एक वर्षको तालिमपछि प्रहरी सैनिक भएर अर्कै आचरण व्यवहारमा पुग्दछ त्यसैगरी ड्रग्समा परेकाहरुलाई पनि पहिला शारिरिक समस्याबाट बाहिर निकाली विशेष प्रकारको रुटिनमा राखि सभ्य समाजमा बस्न आवश्यक पर्ने क्षमताहरु बढाउने तालिममा राख्नु पर्दछ । उसले यदि ड्रग्स खाईहाल्यो भने त्यहिं दिनबाटै उसको खराव आचरणहरु पनि साथसाथै आईहाल्छ ।
म यहिं कारणले हो दुव्र्यसनमा परेका परिवारहरु नार्कोनन् नेपालमा आउँदा पाँच चरणको काम गर्न सल्लाह दिन्छु । पहिला ड्रग्समा परेको मान्छेलाई जागिरमा पठाउने, पढाइमा पठाउने, घरमा राख्ने, विदेश लैजाने, व्यवसायमा लगाउने, विवाह गरिदिने वा उसबाट सहयोगको अपेक्षा गर्ने कार्य नगरी तत्कालै उपचार केन्द्रमा लैजानुहोस् । दोश्रो ६ महिना त्यहाँ राखी शरिरबाट ड्रग्स निकाल्नुका साथै सभ्य समाजमा बस्न आवश्यक गुण बढाउने तालिममा हाल्नुहोस् । तेश्रो ६ महिनापछि जव ऊ सामान्य अवस्थामा आउँछ त्यसपछि सेन्टरबाट एकैपल्ट घर नलगि त्यहिंबाट कलेज, स्कूल वा सीपमूलक तालिममा पठाई बाहिरी दुनियाँमा यो व्यक्ति ड्रग्स नखाई बस्न सक्छ सक्तैन परीक्षण गर्नुहोस् । चौथो करिव एक वर्ष परीक्षण गरेपछि अनि मात्र घर समाजमा फर्काउनुहोस् । पाँचौं यदि घर समाजमा बस्न पुनः असफल भए ड्रग्स लिएको अवस्थामा सेन्टर नभए ड्रग्स नलिएको अवस्था भए परिवारभन्दा टाढा आफैले कमाई खानु पर्ने ठाउँमा पठाउनुहोस् ।
दुव्र्यसनमा परेको व्यक्तिको उपचार ज्यादै कठिन हुने गर्दछ तर दुर्भाग्यवस यस्ता व्यक्तिलाई उपचारमै नलगिदिने, लगे पनि पूरा समय नराखिदिने, राखे पनि सस्तो भन्दै जस्तो पायो त्यस्तै ठाउँमा राखिदिने र त्यो व्यक्तिबाट चाहिनेभन्दा बढि अपेक्षा गरी पैसा कमाउने काममा लगाउन प्रयास गरिदिने गर्नाले उक्त व्यक्ति फेरि समस्यामा पर्दछ । दुव्र्यसनमा परेको व्यक्तिलाई कम्तिमा दुई वर्ष बचाएर राख्नु पर्दछ । अझ कति परिवार सरकारले ड्रग्सको उपचारमा औषधी दिन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका पनि छन् । मानिसहरुले नबुझेर मेथाडोन, विप्रोनर्फिनहरुलाई ड्रग्सको उपचार गर्ने औषधी ठानी खाईरहेका छन् । औषधी भनिएको ती बस्तुनै खतरनाक ड्रग्स हुन् र औषधीले मान्छेको आनिवानि परिवर्तन हुने पनि होईन । कति परिवारले पैसा, विदेश भन्दै ड्रग्समा परेका मानिसहरुलाई अकालमा मार्ने वातावरण पनि बनाई रहेछन् । नेपालमा नारायणहिटि दरबार अझै छ तर ड्रग्सका कारणले त्यहाँ बस्ने कोहि छैनन् । ड्रग्सले सम्पत्ती दिदै दिदैन र दिए पनि भोग गर्न दिदैन । यो कुरा धेरै परिवारलाई बुझाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । अतः अहिले म ड्रग्समा परेका व्यक्तिहरुलाई उपचार गर्नुका साथै यस्तो समस्या कुनै पनि घरमा भित्रिनै नदिनका लागि पनि उत्तिकै प्रयास गर्दैछु । ड्रग्समा परिसकेपछि उसले ड्रग्स छोडि सामान्य जिवनमा फर्किएको स्थितिलाईनै ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ । यदि यो नबुझी पैसा कमाउन धकेलिदिए वा विदेशतिर धकेलिदिए त्यहिं पैसा र विदेशलेनै पुनः उसलाई ड्रग्समा फर्काउँछ ।
Copyright © Narconon Nepal. All Rights Reserved : 2014 - 2021. | Design & Developed by: Nepal Web Tech